Zvitatu mafomu ekufamba-famba neguta mukutakura kwevanhu | IPhone nhau
Itsva kuguta hombe? Uri kuenda parwendo here uye uchida kutenderera nekutakura veruzhinji? Usanetseke, Nhasi tinokuunzira sarudzo yeatatu akanakisa mafomu ekufamba mukutakura kwevanhu. Aya mafomati haatombokusiya waraswa, navo unogona kubva pane imwe nhanho uchienda kune imwe neruzivo rwese, pevhu, bhazi uye masuduru edhorobha, pamwe neiyo chaiyo-nguva timer kuti iwe uzive chaizvo kuti zvinotora nguva yakareba sei kusvika uye wasvika nguva yakadii kuenda kune rinotevera bhazi kuti usvike ipapo Aya maficha hapana mubvunzo kuti ndeimwe yedzakanakisa dzimwe nzira dzatinogona kuwana kuti tifambe tichitenderedza guta zviri nyore uye zvichipa mukuchengetedza kwezvakatipoteredza.
Saka ngatiendei nerunyorwa rwezvikumbiro zvitatu izvo zvinoenderana nezvandakaona ndizvo zvakanakisa zvekutenderera guta nekutakura veruzhinji.
1 Citymapp ndiye
Mutungamiriri wevatungamiriri, ndingadai ndisingazive mabviro epamba pasina chishandiso ichi kuiswa. Iwe unongofanirwa kumuudza kwauri kuenda, iye achamisa nzira yeruzhinji yekutakura, zvichiratidza chaizvo kuti zvinotora nguva yakareba sei kusvika. Iyo zvakare ine kunyorera kweApple Watch uye sisitimu iyo ichengetedze yekupedzisira yekutsvaga muchaché, kuitira kuti isu tirambe tichiziva madhairekisheni kunyangwe tichipera nzira. Iyo zvakare ine chinongedzo neayo makuru epachivande ekufambisa ekushandisa. MuSpain zvinokutendera iwe kufamba famba neMadrid neBarcelona nyore.
Chimwe chikumbiro chakakura, chinodzora chirongwa chebhazi, pamwe nemutengo nenzvimbo. Iwe unozokwanisa kubvunza ruzivo mune anopfuura 1.200 maguta akasiyana. Iwe zvakare uchakwanisa kugadzira mafambiro uye uzive izvo zvaunosarudza zvichatora munguva chaiyo, imwe nzira inonakidza kune iyo yapfuura application yausingafanire kurasikirwa. Izvo zvakare zvinosanganisira kunyorera kweApple Watch.
Iwo mabhazi akadzorawo nekutenda kuTransit, ane mashoma mashandiro muSpain, asi anosanganisira maguta makuru eEurope, uye kunyanya anenge ese North America, anonongedzera kuvadzidzi vedu kubva kuAmerican continent.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Zvikumbiro zvitatu zvekutenderera guta nekutakura kwevanhu
Google inodarika Apple uye inova inonyanya kukosha pasi rose